Malunga nathi -I-Hebei Spring-Tex I / E Co., Ltd.
I-Hebei Spring-Tex I / E Co., Ltd.yinkampani ekhethekileyo kwimveliso kunye nokuthumela kwelinye ilizwe iimveliso zeempahla ezilukiweyo. Abasebenzi bethu abaziintloko banamava angaphezu kweminyaka engama-20 'kwibala lendlu elukiweyo. Ingqondo yabo yokuyila kunye nokukhuthala kubenza ukuba basebenze ngakumbi kule nkalo.
Sinesiseko semveliso esizinzileyo kwaye iimveliso zethu ikakhulu zithunyelwa e-USA, Canada, Australia, Europe nase Middle East. Sibambelela ngokuqinileyo kumgaqo: Umgangatho sisiseko seNkampani, ukuTyala buBomi beNkampani. Sithatha iimfuno zabathengi njengezona ziphambili, kwaye sihlala sisazisa iimveliso ezihlaziyiweyo kubathengi abanxulumene.
Wamkelekile abathengi abavela kwihlabathi liphela ukuseka ubudlelwane bexesha elide kunye nathi kwaye bazise impumelelo kunye nenzuzo. Sijonge phambili kulwandiso lweshishini lethu kunye nabathengi abavela kweminye imimandla emininzi yehlabathi.
Zonke iimveliso zethu kulindeleke ukuba zibenze bube lula ngakumbi ubomi bakho.